Chakra na-adaba nkwado maka i686 | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Nkesa, Noticias
Chakra, otu n'ime nkesa kachasị mma Pro-KDE, dobe nkwado maka ndị nhazi i686 (32 Bit), ilekwasị anya mbọ gị niile na ndị na - arụ ọrụ x86_64 (ibe 64) n'ihi ọganihu nke ikpeazụ nwere n'ahịa.
N'ihi nkesa na-eto eto nke ụdị ndị na-arụ ọrụ a, ọ dị ole na ole na ndị ọrụ (nke ule) nke distro a nke na-eji 32 bits, ya mere nkwado siri ike karị. Ọ bụ ya mere ihe ezi uche dị na ya na ngbanwe nke Chakra, dị ka ndị mmepe ya si kwuo, bụ ịhapụ kpam kpam ikpo okwu a ebe ọ bụ na nkesa ndị ọzọ nwere ọrụ maka ịkwado ya.
N'ime ọnwa 2-3 sochirinụ ndị ọrụ nke Chakra ha ga-anata ha niile ndozi bug na nchedo nche. Mgbe nke ahụ gasị, a ga-edebe ebe nchekwa i686 na enyo ha na-akaghị aka, mana akwadoghị ya.
You pụrụ ịhụ ihe ukara dee (English) na njikọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Chakra na-adaba nkwado maka i686
M na-ahụ nke a dị ka ezi mkpebi, ịbụ Chakra a distro na-enweghị ọtụtụ devs 🙂
A na m ahụ nke a dịka mkpebi na-ezighi ezi.
Ka anyị chee ya ihu, ngwa 32-bit dị n'èzí ma nweta ọtụtụ nnwale ka ha wee nwee obere chinchi, ebe ngwa 64-bit dị "buggy".
Echere m na ịhapụ 32bits abụghị ezigbo mkpebi
Ngwa 64-bit nwere "nsogbu" karịa n'ihi na anaghị akwụ ha ụgwọ dịka ha kwesiri, n'ihe banyere distros nke na-enye nsụgharị maka ụlọ abụọ ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ha elekwasị anya n'otu ụlọ ọ ga - eme ka nkwado ahụ dịkwuo mma, na nke m, echere m na ha mere nke ọma ilekwasị anya n'otu ụlọ, ebe ọ bụ na ugbu a PC niile na - akwado ya.
Ee, n'ezie, ma ihe Chakra kpebiri bụ ihe siri ike, nke ahụ bụ ... dị ka m na-ahụ ya: «Ọ bụrụ na ịchọrọ iji Chakra ị nwere karịa iji 64bits mkpa. »
O doro anya na nkwado ga-aka mma, mana ọ ka bụ nnabata na anaghị m achọ personally
Echeghị m na ọ bụ njehie, otu ihe ahụ kwuru banyere bits 16.
Ọzọkwa, m na-eji 64-bit OS eme ogologo oge ma enwebeghị m nsogbu na ọ na-eji ọtụtụ RAM bụ akụkọ ifo.
Kedu maka, na chakra nkwupụta ọ na-ekwu na a gaghị akwado ihe owuwu 32-bit ISO ka a kwado ya, agbanyeghị ngwa 32-bit ka ga-echekwa, (Enwere ọtụtụ ndị anaghị adị na mbipute 64), ebe ọ bụ na ebe nchekwa lib32 ga-anọgide iji kwado ngwa ndị jiri ọba akwụkwọ ndị a.
Zaghachi na Sephram
ọ ka mma, ọtụtụ ndị ọrụ gị ga-abụ x64
N’ile ya anya n’uche onye otu ibe m, ekwere m na ọ bụ mmeghe. Ihe niile mara na ngwa 32-bit bụ nke kachasị na nke kachasị ntakịrị.
Ma hey, ọ bụ nzọụkwụ na mmalite nke nkesa a. Anyị ga-ahụ otu ihe a niile si apụta.
Enweghị m mmasị na ha hapụrụ ụlọ, m na-eji X86-64 na laptọọpụ m mana Desktọpụ m bụ i686 yabụ ọ bụrụ na ihe agahie, agaghị m enwe onye ọ bụla ga-kọọrọ ya ... ọ dịghị ụzọ ọ bụla ... anyị ga- imeghari na-anabata mgbanwe Olileanya ọ bụ ka mma
Achọrọ m ịnwale ya ... Ọ bụ ezie na onye nhazi m (Pentium Dual Core E2140) na-akwado 64 Bits, agaghị m eji 64 Bits (+ KDE) jiri naanị 1GB nke RAM 😛 Kedu igbu onwe onye ...
N'ihi okwu gị, achọpụtara m na nhazi m na-akwado 64-bit (Pentium Dual Core E5200). Ọ bụ ụdị nke hilarious. Echere m na ọ dị 32-bit n'ihi na edepụtara ya na Windows mgbe m zụtara PC m, kemgbe ahụ m were ya n'echeghị na ọ bụ, mana site na ihe m gụrụ ugbu a enwere m Windows 32-bit n'ihi na m nwere naanị 2GB ebulu .
Ọfọn, ọ na-ada ike, ma dị ka otutu ekwuola, ọ dịghị onye chọrọ iji Chakra. Hụ na ọbụnadị gtk + anaghị abịa na ndabara na nkesa.
Izu ole na ole gara aga agara m 32-bit n'ihi na enwere m ụfọdụ nsogbu na ụfọdụ ngwa, mana arụmọrụ n'ozuzu dara wee chee na ọ baghị uru imefusị ikike processor maka ụfọdụ ngwa (ọtụtụ n'ime ha nwere, nri?). Nyaahụ, m ga-edozi kọmputa m xD
Ọfọn, ha na-enye m ịnyịnya ibu ahụ kama ọ dị mma (gbaghara m): X
Ọ bụ ọkacha mmasị m distro mgbe m tinye ya na netwọkụ m n'ebughị ọsụsọ. Mana m chere na ihe ọma niile gwụrụ: S.
Ozi ojoo. Echeghị m na ha melite nkwado ụdị 64 bit. A ga-etinye otu mgbalị ahụ ruo ugbu a (enwere m olileanya na m hiere ụzọ) naanị ihe ga-agbanwe bụ na anyị agaghịzi enwe ụdị 32-bit.
Echere m na ọ ga - abụ nnukwu mkpali maka ndị ọrụ 32 Bit ka ha jiri KDE gbagoo Arch
Kpamkpam kwenyere, ọ bụrụ n'ịchọrọ iji bita 32, mgbe ahụ a ga-enwe Arch Linux.
Aghọtaghị m mkpesa ndị ahụ, anọ m 64bits kemgbe ọtụtụ afọ na enweghị m nsogbu karịa otu oge yana sọftụwia "enwere obi abụọ". Kedu ihe ọzọ, distros ndị ọzọ kwesịrị ịlele ma melite nkwado 64-bit, nke bụ nke kacha gbasaa ugbu a ...
ọ bụghị_nkechi dijo
Ma chakra abụghị arch na kde site na ndabara na ụfọdụ njikarịcha? Echere m na ọ bụrụhaala na archlinux na-akwado i686, a gaghị enwe nsogbu.
Ọ bụ, ogologo oge gara aga Chakra kpebiri ịhapụ Arch wee ghọọ nkesa onwe ya, ọ bụ ezie na usoro ahụ ezughi oke ma ọ bụrụ na ọ dị elu dị ka nke ccr, Tribe na ọganihu nke Akabei gosipụtara.
Echiche ojoo. Ma ha na-ekpebi ihe a ga-eme na distro ha, ndị ọrụ na-ekpebi ma ha ga-eji ya. Nsogbu a agaghị aga 64 bit ma ọ bụ na ọ bụghị, nsogbu bụ na akụrụngwa gị na-akwado ya.
Echere m na ọ bụ mkpebi amamihe dị na ya, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọrụ ka na-eji 32 bits (ikpe m na netbook m) ihe niile maara na KDE abụghị gburugburu ebe kachasị dị adị, yana maka maka arụmọrụ kacha mma 100% ọ chọrọ opekata mpe A dịtụ ezigbo kọmputa (Oh, ị gaghị atụ anya na ọ ga-afụ gị na 512 Ram na a Mononucleo Processor) na nchịkọta, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya kwupụta evolushọn, dị ka e kwuru n'oge ha na ha dị egwu site n'izere nsonye. nke ọba akwụkwọ gtk + ma lelee otú ha si mee nke ọma.
/ Echere m na otu nzọ ụkwụ, m kwenyere na ije 64-bit bụ ọdịnihu na enweghị m nsogbu na mmemme, ọ bụ ihe nkịtị na laptọọpụ ọhụrụ na PC nwere ọtụtụ RAM na ndị nhazi nke 32-bit architecture takes pụọ na ikike niile.
Ọfọn, kama ime mkpesa ka mma, amalitere m ịchọpụta banyere ya, enwere m Chakra 32Bits na obere laptọọpụ dịtụ (ya na onye na-arụ ọrụ Celeron), m hụrụ na ọbụnadị ihe nhazi ahụ dị ala site na 4 afọ gara aga na-akwado 64bits, yabụ, etinyeziri m Chakra 64Bits ozugbo na-enweghị nsogbu ọ bụla.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga-abụ Arch 32Bits.
Ejirila ndị nhazi niile dakọtara na teknụzụ 64-bit ruo ọtụtụ afọ.
Ọ dị m ka mkpebi a na-enyo enyo….
karịrị ma mmemme 64-bit rụọ ọrụ nke ọma karịa mmemme 32-bit ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ụfọdụ na-enye nsogbu karịa ndị ọzọ
Anyị na-ekwu maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-edozi 32-bit processors agbahapụla
n’uche nke m ọ bụghị na anyị na-ekwu ihe ọjọọ. ma ha gaara enye ntakịrị ọkwa tupu oge eruo ma ha gaara eche obere oge
Aghọtara m mkpebi ahụ n'agbanyeghị na enweghị m mmasị na ya.
Ajuju igwe 2 GB ka o gha esi aru oru na 64 bits?
Achọpụtara m na ọ na-enye obere nsogbu na a na-ahụta igwe dịkarịa ala ma ọ bụ karịa 5 afọ nke mere na ha ekwesighi ịkwado nkwado, mana chakra bụ distro nwere obere akụ toro eto nke ukwuu, ya mere ọ bụ ihe kwere nghọta.
ọ na-aga nke ọma, na nke m ahụtụbeghị m ọ gafere 1.5GB nke Ram na openSUSE na KDE.
Ugbu a, ana m eji Mageia 2 na Gnome-Shell x86, pc na-adị m mfe na-emegheSUSE KDE4 x64
Enwere m PC dị afọ 5 ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke na 64Bits chakra ma ọ naghị eri ihe karịrị 1.5 GB (enwere m 4) yana mmemme mmemme m na-eji kwa ụbọchị.
Welite aka gị ma ọ bụrụ na ị nwere nhazi nke na-adịghị akwado 64 ibe n'ibe.
Enwere m 1,6 GHz x 2 pc na 1,7GB nke ebule na 64-bit debian ule na gnome shell (ya na ọrụ niile) ọ na-efe efe. Ejirila m igwe 64-bit nwere naanị 1GB RAM na 64-bit na gnome 2 na enweghị nsogbu.
Amaghị m, ụjọ ha yiri ka enweghị isi.
Enwere m igwe dị iche iche anaghị akwado OS 64-bit. Na nke ndị na-akwado ya, ahụbeghị m mmụba dị ịrịba ama mgbe m na-atụnyere, ahụrụ m naanị nsogbu ọhụụ. Echere m na ọnọdụ ahụ ga-akawanye mma ma m ga-enwe ike iji ngwa 32-bit na usoro 64-bit na-enweghị isi m na-adabere na ịdabere na ya. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ọ dịghị mkpa n'ihi na ihe 32-bit ngwa nwere ha 64-bit Ẹkot. Ọ meela ogologo oge kemgbe m nwara GNU / Linux 64-bit, ọ tụrụ m n'anya na-atọ m ụtọ.
N'aka nke ọzọ, echeghị m na Samsung NB30 na-efe efe na Chakra 64-bit. M ga-elele ya na eserese na-esote.
Ọ bụghị m, na ọtụtụ afọ na ndị nrụpụta niile, ọbụlagodi nke netbooks, na-akwado ibe 64, maka PC ochie, enwere nkesa ndị akwadoro.
Zaghachi Albert teixidor
agbanyeghị na m enweghị ike ịwụnye distro ahụ ziri ezi ka m wee jiri debian
Roberto na-agbanwe Santana dijo
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, ọ ga-eme n'oge na-adịghị anya.
Teknụzụ na-abaghị uru n'oge na-adịghị anya.
Ọzọkwa, ọ bụ nkịtị na a bụghị nnọọ nnukwu ìgwè ndị mmepe. O buru oke ibu.
Nke nta nke nta ndị ọzọ ga-eso.
Zaghachi Roberto Evolucionando Santana
Maka m ọ bụ nnukwu ndudue ma m na-eji 32 na 64 ibe n'ibe.
A na-akatọ Ubuntu n'ihi na ịdị n'otu ya na-ejedebe ndị ọrụ na kọmputa ochie n'ihi nnukwu ihe oriri ya na chakra na-eme ihe ka njọ.
Na nkenke, chakra ndị a na njedebe abụghị naanị otu.
Amaghị m ihe ha gwara m na ha ga-akụ nnukwu mkpọtụ.
Dị ka o kwesịrị, ndị ọrụ chakra ahụ nwere otu 64 na usoro 32, nwere ike ịga 64 na nkasi obi n'emeghị ka ịtinye usoro ahụ dum.
nwute na m na-anwale ma ọ bụrụ na koodu HTML ka na-arụ ọrụ
Anam eweli aka m !!!
Enwere m kọmpụta desktọpụ m, Dell Gx260 kemgbe ihe karịrị afọ iri gara aga,
a 32-bit system, p4 3.0 Ghz, 2 gb in ebulu, 2 dd of 120 gb, na agp graphics nvidia geforce 5200 with 128 ram (ọ na-arụ ọrụ na nouveau ọkwọ ụgbọala), na m nwere m hụrụ n'anya Arch, na ihu nke xfce na kde, n'ezie nke a ikpeazụ ịkpụ n'ọhịa nke mmetụta eserese (yana deactivating nepomuk na akonadi, n'ihi na ọ bụrụ na nhazi ahụ na-agba ọsụsọ na ndị a), mana m wụnye ya iji nwalee onwe m, uru nke ole kwuo okwu kde.
Zaghachi ka bitblue
Ndị nwere 32 bits ọ ga - ekwe omume na ha gafere manjaro ọ dabere na Arch http://blog.manjaro.org/.
PS M ka na-enwe obi ụtọ na ndụ na Chakra 🙂
Aga m elele ụdị xfce nke distro ahụ.
Nke a ọ pụtara na agaghị m enwe ike ịwụnye Chakra na 32bit ije naanị 64bit? E ghere m eghe mgbe !! 🙁
Mazi Linux. dijo
Kọmputa kọmputa anaghị akwụsị akwụsị ma na-aga n’ihu mgbe niile, na-eme ka teknụzụ ndị na-abaghị uru mebiri emebi ma ọ bụ hapụ ha n’akụkụ. Na-atụ anya na ịgbanwee site na 32-bit ka 64-bit ga-ewe ogologo oge ka ndị mmadụ nwee ike ịgbanwe otu.
Zaghachi Mr Linux.
nke ọma .. ọ bụ ihe ezi uche dị na ya nke ọtụtụ anaghị anwa anwa ịme
Ọbụna P4 na-akwado 64 ibe n'ibe. M na-eji x86_64 distros eme ihe mgbe niile ma ghara inwe nsogbu ọ bụla. Kasị nkesa na-agụnye 32-bit ọba akwụkwọ na-agba ọsọ 32-bit naanị ngwa na 64-bit ije.
Ikwesiri icheta na ọ bụrụ na inwee ihe nhazi 64-bit, etinyere usoro gị niile iji kwado ya. Ọ pụtaghị na ọ ga-eri karịa ebe nchekwa ma ọ bụ na ọ na-eje ozi iji lebarakwu RAM anya, ọ bụ usoro ahụ n'ozuzu ya; akụrụngwa niile na sọftụwia na-arụ ọrụ na ụlọ ahụ, yabụ na ị na-efu ego ị mefuru na ngwaike site na iji ngwa na ụlọ ije kwesịrị ekwesị.
Ọ dị ka mkpebi amamihe dị na ya nye m. Ọzọkwa, ị gaghị achọ ịgba ọsọ Chakra na nhazi i686, maka akụrụngwa ochie enwere ụzọ ndị ka mma.
Afọ ole na ole gara aga, emere m ule arụmọrụ na kọmputa na ihe AMD Athlon 64 X2 processor na 64-bit OS dị nwayọ karịa 32-bit (ma were ọtụtụ RAM). Yabụ ihe ahụ gbasara gị imefusị ego site n’iji bits 32 bụ naanị ahịrịokwu na-enweghị isi. Ndị mmadụ anaghị eji 32-bit naanị n'ihi. Imefusị ego bụ iji ihe na-arụ ọrụ ka njọ. 64-bit technology na-maturing ma ọ bụghị ogologo oge gara aga na ọ bụ nnọọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ndị Chakras mere mkpebi dị mma n'echiche ha. Ha na-elekwasị anya na ihe owuwu ụlọ na desktọọpụ iji nweta ihe kachasị mma na akụ ha nwere. Mana nke ahụ ka bụ akụkọ ọjọọ nye ọtụtụ ndị ọrụ. Ọ dabara na enwere ụzọ ndị ọzọ.
Enwere m (AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200 +) na ọ na-arụ ọrụ nke ọma na 64Bits chakra na oriri nchekwa ahụ yitụrụ, ana m ekwu nke a ka ọ ghara imegide gị ma ọ bụ bulie arụmụka. Ọ bụ ule m mere iji hụ ụdị m hapụrụ, agbalịrị m ubuntu 11.04 na kubuntu 11.10 na nsonaazụ yiri nke dị n'etiti 32 na 64.
Hụ nke a iji hụ ihe ị chere
Ben udo dijo
M hụrụ Chakra n'anya mana enwere m nsogbu na-anaghị amata batrị akwụkwọ ndetu (Toshiba Satellite L645), ọ bụrụ na onye ọ bụla maara etu esi edozi nsogbu a, biko nyere m aka. Daalụ.
Zaghachi Ben Paz
O doro anya, OS a agaghị aba uru maka ụlọ ọrụ, azụmaahịa na ụlọ akwụkwọ, ebe ọ bụ na pc 64-bit adịghị mkpa iji rụọ ọrụ na ọdụ USB ma ọ bụ Parallel iji chịkwaa igwe na usoro ụlọ ọrụ mmepụta ihe, obere iji akwụkwọ ma ọ bụ ihe nhazi. ederede. ọ bụ karịa, ọbụnadị n'ụlọ eji mụta nwa HD ihe nkiri.
N'ezie, ihe nhazi 64-bit dị ọsọ ọsọ karịa nhazi 32-bit, mana ọ na-erite uru na ya, ọ dị mkpa na ojiji niile nke PC? Maka m ọ bụ ahịa dị ọcha, echere m na ọ kwesịrị ịga n'ihu imepụta ndị nrụpụta nke teknụzụ dị iche iche ka e wee nwee ọnụ ahịa dị iche iche maka mkpa na ojiji niile.
Slitaz RazorQT: ekpomeekpo ọhụrụ nke Slitaz na Qt